By vijayafm on	 April 2, 2019 फोटो फिचर, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
गैँडाकोट । कावासोती नगरपालिका वडा नं. १५ मा शेरगञ्ज बस्ती रहेको छ । जहाँ बोटे माझी मुसहरहरुको बसोबास छ । यहाँ यस समुदायको ८५ घरधुरी रहेको छ । त्यहाँको समुदाय गरिबी तथा अशिक्षाका कारण विभिन्न समस्याले गुज्रिरहेको छ । शेरगञ्जमा बालविवाहको समस्या अझै न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । गरिबी र अशिक्षाका कारण बालविवाहले जरो गाडेको छ । परिवारको आर्थिक अवस्था दयनीय र अशिक्षित भएकै कारण अभिभावकले सानैमा विवाह गरिदिने र कतिपय बालबालिका सुख पाइन्छ भनेर विवाह गरेर भाग्ने मनोविज्ञान बढ्दो रहेको छ । शेरगञ्ज मात्र होइन कावासोती नगरपालिकाको वाड नं. ७, ११, १२, र १३ मा पनि बोटे माझी समुदायको बसोबास रहेको छ ।
२१ वर्षकी कल्पना माझीको ३ वर्षको एउटा सन्तान छ । माइतीमा ठूलो परिवार थियो । पालन पोषणमा समस्या थियो । विवाह गरे सुख पाइन्छ कि भन्ने लागेर कल्पनाले सानै उमेरमा विवाह गर्ने निर्णय गर्नुभयो । अहिले सानै उमेरमा विवाह गर्दा सुख होइन दुःखमात्र पाइने कल्पना माझीको भनाइ छ “विवाहपछि सुख हुन्छ भन्ने लागेर विवाह गरेँ तर होइन रहेछ, सानैमा विवाह गरे अहिले पछुतो लागेको छ । श्रीमान्ले गर्ने पिट्ने, कुट्ने व्यवहार गर्छन् । त्यसैले विवाह गरेर खुसी मिल्छ भन्नु भम्र रहेछ ।”
शेरगञ्जकै कृष्णकुमारी मुसहरको चार वर्षको सन्तान छ । २४ वर्षकी कृष्णकुमारीले १८ वर्षको उमेरमा विवाह गर्नुभएको थियो । उहाँले ९ कक्षासम्म मात्र अध्ययन गर्नुभएको छ । आफ्नै इच्छाले विवाह त गर्नुभयो तर अहिले भने पश्चातापमात्र परेको छ । पढेलेखेको भए राम्रो जागिर पाइन्थ्यो, जीवन सहज हुन्थ्यो कृष्णकुमारीको भनाइ छ ।
माझी मुसहर समाजका अगुवा सन्तबहादुर माझीले यस बस्तीमा अझै पनि ९५ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको दाबी गर्नुभयो । पहिलेको तुलनामा केही सुधार रहेपनि समस्या विकराल रहेको बताउनुभयो । अभिभावकले नै सानै उमेरमा विवाह गर्न प्रेरित गर्ने गरेको अगुवा माझीको भनाइ छ “गाउँमा सबै बालबालिकाका अभिभावकहरुलाई सानैमा विवाह गर्नु गराउनुहुन्न, यसले यस्तोउस्तो असर गर्छ भनेर धरै सम्झायो, बुझेझँै गरेर हुन्छ, हस् भन्छन् अनि फेरि १५ वर्ष पुगेपछि अब बिहे गर्नुपर्छ पढ्ने होइन भनेर बिहे गरिदिन्छन् । पहिले भन्दा केही कम त भएको छ तर अझै पनि बालबिवाह हटाउन सकिएको छैन । आजाभोलि त विद्यालय जाँदा उतैबाट मनपरेको केटाकेटी भागेर विवाह गर्न थालेका छन् । ”
शेरगञ्ज बस्तीमा रहेको माझी प्राथमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक रामकुमारी मर्दनियाले बालविवाह गरेर बीचमा पढाइ छोड्ने बालबालिका रहेको बताउनुभयो । अशिक्षा र गरिबीकै कारण पढाइमा अभिभावकहरुको ध्यान कम जाने गरेको प्रधानाध्यापक मर्दनियाले बताउनुभयो ।
कावासोती नगरभित्रका केही बस्तीहरुमा देखा परेको वालविवाह न्यूनीकरणका लागि नगरपालिकाले कामका लागि योजना बनाइरहेको उपमेयर प्रेमशंकर मर्दनियाको भनाइ छ । यस समुदायका लागि जनचेतना र जीवन स्तर उकास्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उपमेयर मर्दनियाको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “चेतनाको कमीका कारण पुख्र्याैली पेसामा मात्रै निर्भर यिनीहरु अझै आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठन सकेका छैनन् भने बालविवाहमा पनि कमी आउन सकेको छैन ।” यसका लागि विगतदेखि नै तराई भूपरिधि ताल कार्यक्रमसँग समन्वय गरेर विविध कार्यक्रमहरु गरेको नगर उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनियाले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक समेटिएको छ । धारा ३९ को ५ दफामा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह गराउन पाइने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा उल्लिखित कुरामात्र होइन, बालविवाह गर्दा हुन सक्ने शारीरिक जोखिमका बारेमा पनि समुदायमा सचेतना जगाउनु आवश्यक छ ।